Thwebula Clash of Clans 8.551.24 – Vessoft
Thwebula Clash of Clans
Clash of kwamaqembu – umdlalo othandwayo uhlobo amasu ukwakha settlement yakho siqu futhi athuthukise clan. In the game udinga ukuba bandise futhi uthuthukise settlement yakho siqu futhi andise izikhali ukuze bazivikele izitha. Clash of kwamaqembu kwenza ukuthola ibutho namaqaba, empi, nabathakathi, nezilo kanye namanye amabutho anamandla. Umdlalo ikuvumela ukudala clan yakho siqu, ukuthuthukisa it, ukuvikela kanye ukuhlasela amanye imindeni. Clash of kwamaqembu iqukethe isakhi kwezomnotho lapho udinga lokusakaza ezikhona ngcono kanye nokuvikelwa emizaneni ezitheni.
An game ezithakazelisayo uhlobo of isu
Battle nabadlali emhlabeni jikelele
Amazwana on Clash of Clans:
Clash of Clans Ahlobene software: